Elkhorn Mountain View Getaway w/ Tub eshushu (entsha)
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguLea
Eli khaya langoku libonisa iimbono zeklasi yokuqala yeentaba ze-Elkhorn ngaphandle komnyango ongasemva kunye neentaba zeWallowa ngaphandle komnyango wangaphambili, yonke nje imizuzu eli-15 ukusuka edolophini yaseBaker City iyenza ibe yeyona ndawo ifanelekileyo yekampu yohambo lwakho. Beka kwiihektare ezi-7 ezinamagumbi okulala amathathu amakhulu, amagumbi okuhlambela ayi-2.5 kunye neendawo zokuhlala ezinamagumbi amaninzi anokonwaba. Idesika yangasemva ibandakanya ibhafu eshushu, isethi yokutyela yangaphandle, umgodi womlilo wepropane kunye ne-pellet grill. Yonwabela iimbono ngelixa unendawo ebanzi yokuphumla kwaye uphumle!
Ngaphakathi kwendlu ihlaziyiwe kwaye iya kukunika yonke into oyifunayo ukuze uhlale kakuhle! Idesika yangasemva ibandakanya ibhafu eshushu yamanzi anetyuwa, isethi yokutyela yangaphandle, umgodi womlilo kunye negrill ye-pellet yentaba eluhlaza. Misela kwiihektare ezisi-7, ingxolo ayingomcimbi kwaye uya kuyifumana izolile kwaye izolile. Uza kwabelana ngeehektare ezisi-7 nabahlali abathathu abalinganayo, iSnoop, iDee neRoo kunye nemeyile, eMoscow.
Phezulu uya kufumana indawo yokuzivocavoca yasekhaya ene-treadmill, ibhentshi yokuzilolonga kunye ne-assortment yeedumbbells kunye neebhendi zokuxhathisa. Idesika yeofisi ekhululekile kunye nesitulo silungile ukuba ufuna ukusebenza ngelixa undwendwela. Uya kuba nokufikelela kwisantya esiphezulu se-wifi kunye neNetflix, iAmazon kunye neHulu ngeRoku. Akukho ntambo. Imidlalo yebhodi kunye neNintendo 64 nazo zinikezelwe.
Uya kufumana iitawuli ezininzi kunye neeshiti ukuze zilungele iimfuno zakho. Le ndlu ibandakanya isixhobo sokomisa iinwele, i-steamer yesandla, isifudumezi sendawo, ifeni, umatshini wengxolo okhoyo, umatrasi womoya ongukumkanikazi kunye nezinto zangasese ezisisiseko. Ebusika sinikezela ngezicathulo zekhephu ngaphandle kwentlawulo ukuze uhlolisise iindawo ezintle ezijikeleze ipropati.
Ukuba ujonge into yoncedo okanye into engabandakanywanga, vele usithumelele umyalezo. Siyavuya ukwamkela nayiphi na indlela esinokuyenza kwaye sijonge phambili ekukumkeleni, usapho lwakho kunye nabahlobo!
$25 intlawulo yesilwanyana ngasinye
$5 umrhumo iindwendwe ezongezelelweyo phezu 12
$100 intlawulo yesohlwayo ukuba izilwanyana zasekhaya kunye neendwendwe ezongezelelweyo azixelwanga ngaphambili
Indlu ikwiihektare ezisi-7 nangona unokubabona abamelwane bakho, ibucala kakhulu! Jabulela amahashe ahlala kunye neenkomo ezingabamelwane, kunye nezandi zelizwe ezihamba kunye naloo nto. Indawo esiyithandayo yendlu kukungabikho kongcoliseko lokukhanya kunye nezandi zesixeko, ngamava okuphumla ngokwenene. Siziikhilomitha ezili-12 kuphela ukusuka kumbindi wedolophu yaseBaker City.
I'm an avid traveler and AirBnb'er myself. I love to host and share my beautiful home and wonderful community with others!
Uya kuba nendlu yonke kuwe, sihlala iimayile ezi-2 phezulu kwendlela kwaye ziyafumaneka ngayo nantoni na onokuyidinga. Amahashe ethu ahlala kwipropathi ngoko ke nceda ulindele ukuba siza kufikelela kwipropathi kunye nezakhiwo ezingaphandle ukondla amahashe, kodwa qiniseka ukuba iya kuhlala iphakathi kwe-8am kunye ne-5 p.m. kwaye ungaphazamisi kubumfihlo bakho.
Uya kuba nendlu yonke kuwe, sihlala iimayile ezi-2 phezulu kwendlela kwaye ziyafumaneka ngayo nantoni na onokuyidinga. Amahashe ethu ahlala kwipropathi ngoko ke nceda ulindele ukub…